PETALS Archives - Okwu Ugbu a
Mkpagbu! Na Omume Ala Mmiri
Ihe na March 21, 2012 April 17, 2017 by Mark
Dika otutu mmadu na-eteta na mkpagbu na-eto eto nke Nzuko a, edemede a na-ekwu ihe kpatara ya, na ebe o na-aga. Mbụ bipụtara December 12th, 2005, emelitere m okwu mmeghe n'okpuru the
Aga m ewere nguzo m na-ele anya, na-eguzo n’elu ụlọ-elu tọwa ahụ, na-elepụ anya ịhụ ihe ọ ga-agwa m, na ihe m ga-aza gbasara mkpesa m. Jehova we zam, De ọhù ahu; mee ka o doo anya na mbadamba nkume, ka onye na-agụ ya wee nwee ike ịgba ọsọ. ” (Habakuk 2: 1-2)
THE izu ole na ole gara aga, eji m ike ọhụrụ na-anụ n’ime obi m na mkpagbu na-abịa - “okwu” nke Onye-nwe-anyị yiri ka ọ ga-agwa ụkọchukwu na mụ mgbe m na-alaghachi na 2005. Dịka m na-akwado ide maka nke a taa, M natara ndị na-esonụ email site na-agụ:
Enwere m nrọ dị egwu n'abalị ụnyaahụ. M tetara n'ụtụtụ a na okwu ndị aMkpagbu na-abịa. ” Na-eche ma ndị ọzọ na-enweta nke a…
Nke ahụ bụ, ma ọ dịkarịa ala, ihe Achịbishọp Timothy Dolan nke New York gosipụtara na izu gara aga na agbamakwụkwọ mmekọ nwoke na nwoke a nabatara iwu na New York. O dere…
… Anyị na-echegbu onwe n'ezie maka nke a nnwere onwe nke okpukpe. Ndị nchịkọta akụkọ na-akpọrịrị maka iwepụ nnwere onwe nke nnwere onwe okpukpe, yana ndị na-eme mkpọtụ na-akpọ oku ka a manye ndị okwukwe ịnakwere nkọwa a. Ọ bụrụ na ahụmịhe steeti na mba ndị ọzọ ebe iwu a adịworị bụ ihe ngosipụta ọ bụla, a ga-esogbukwa ụka, na ndị kwere ekwe nso n'oge na-adịghị anya, yie ha egwu ma kpụga ha n'ụlọ ikpe maka nkwenye ha kwenyere na alụmdi na nwunye dị n'etiti otu nwoke, otu nwanyị, ruo mgbe ebighi ebi , na-akpọbata ụmụaka n'ime ụwa.- Site na blog Archbishop Timothy Dolan, "Afterfọdụ Mgbe Echiche", Julaị 7th, 2011; http://blog.archny.org/?p=1349
Ọ na-ekwughachi Kadịnal Alfonso Lopez Trujillo, onye bụbu Onye isi ala nke Pontifical Council maka Ezinụlọ, onye kwuru afọ ise gara aga:
"… Ikwu okwu ịgbachitere ndụ na ikike ezinụlọ na-aghọ, n'ụfọdụ obodo, ụdị mpụ megide Ọchịchị, ụdị inupụrụ ọchịchị isi…" - Obodo Vatican, June 28, 2006
Ihe na November 7, 2009 July 20, 2017 by Mark
Lelie anya! II - Michael D. O'Brien
Ntụgharị uche a bụ nke izizi bipụtara na Nọvemba 4, 2005. Onye-nwe-anyị na-ekwukarị okwu dịka ngwa ngwa ndị a dịka nke dị nso, ọbụghị n'ihi na enweghị oge, kama iji nye anyị oge! Okwu a na-abiakute m n’oge a ma ọ dị ngwa karịa. O bu okwu otutu nkpuru obi n'uwa nile na-anuru (ya mere echekwala na ino nani gi!)
—BETRIR MB F—
THE epupụta adawo, ahịhịa agbanwewo, ifufe nke mgbanwe na-efekwa.
You nwere ike ịma ya?
Ọ dị ka ọ bụ ezie na "ihe" dị na mbara igwe, ọ bụghị naanị maka Canada, kamakwa mmadụ niile.
Ndị Protestant, ndị Katọlik, na Agbamakwụkwọ Na-abịanụ
Ihe na October 1, 2009 April 4, 2020 by Mark
—Peta nke atọ—
NDỊ a bu “petal” nke ato nke ahihia okwu amuma nke Fr. Mụ na Kyle Dave natara na Fall nke 2005. Anyị na-aga n'ihu ịnwale ma chọpụta ihe ndị a, ka anyị na ha na-akọrọ gị maka nghọta gị.
Ihe na November 17, 2008 October 9, 2017 by Mark
St. Michael onye isi ndi mmụọ ozi - Michael D. O'Brien
NDỊ a edere mbu ede na Disemba nke 2005. O bu otu n’ime ihe odide putara ihe na saiti a nke putara ihe n’ebe ndi ozo no. Emelitere m ya ma weghachite ya taa. Okwu a dị ezigbo mkpa… O gosiputara otutu ihe ndi n’eme ngwa ngwa n’uwa taa; anụrụ m okwu a ọzọ na ntị ọhụrụ.
Afọ nke mkpụghe
Ihe na December 31, 2007 April 17, 2017 by Mark
VIGIL OF oriri nke Virgin Mary Ngọzi,
AMID nri oriri na ọ Christmasụ Christmasụ nke ekeresimesi na ezinụlọ na-ada ụda, okwu ndị a na-aga n'ihu na-ese n'elu mkpọtụ ahụ na nnọgidesi ike:
Nke a bụ Afọ nke mkpughe…